MegaTV Player hijerena fantsom-bola maimaimpoana manerantany | Androidsis
Jose Alfocea | | Fampiharana Android, Streaming, Android cheat, Tutorials
Tianao mijery fantsona karama maimaim-poana? Noho ny tsy fetezan'ny Wiseplayer mijaly amin'ny resaka fandefasana lalao baolina kitra, androany aho te-hanolotra sy hanome sosokevitra fampiharana hafa, izay andehanantsika afaka mijery TV mandoa maimaimpoana, ao anatin'izany ny fantsona baolina kitra na fantsom-panatanjahantena karama na famandrihana.
Ny fampiharana apetraka dia tsy iza fa ny haino aman-jery tsotra izay hitantsika maimaimpoana ao amin'ny Google Play Store, fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android, amin'ny anaran'ny MegaTV Player. Aorian'izany dia asehonay anao izahay, rehefa asehonay anao amin'ny horonantsary mifatotra amin'ilay lohatenin'ity lahatsoratra ity, ny fandefasana tsotra ny fampiharana ary koa ny tsotra kokoa aza fomba fanamboarana hahafahana mijery TV maimaim-poana mivantana amin'ny findainao na ny takelaka misy ny rafitra fandidiana Android.
Ahoana no ilazako aminao ao amin'ny horonan-tsary mifandraika amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, ary asehoko anao ihany koa ny fahombiazan'ny fampiharana MegaTV Player hijerena TV maimaim-poana avy amin'ny finday Android-nay, ny fampiharana dia mora ampiasaina toy ny manampy oneplay.tv amin'ilay ampahany manontany antsika URL an'ny Lisitry ny Play miteraka.
Amin'ity dingana tsotra apetraka ity oneplay.tv ho voampanga izahay lisitr'ireo fantsom-bola be karama mifanaraka tsara amin'ny sokajy toy ny Sports, Series TV, Film and series, Mozika, Ankizy, siansa ary kolontsaina na sokajin'ireo firenena amerikanina latina lehibe toa an'i Mexico, Arzantina, Chile na Kolombia ankoatry ny hafa ary, ahoana no fomba hafa, ny fantsona ankapobeny sy ny Misokatra avy any Espana.
Ao amin'ny lisitry ny fantsom-bola alefa ao anaty MegaTV PlayerHo fanampin'ny fanomezana anay ireo fahafaha-manao rehetra nolazaiko ireo teo ambony ireo, dia omena safidy hafa mahaliana ihany koa izahay toy ny fidirana amina andian-dahatsoratra Fantsona Premium, izay maimaimpoana ary tsy mila famandrihana, hahazoantsika alalana atiny manokana ho an'ny olon-dehibe.
Safidy iray hafa mahaliana ihany koa ny lisitry ny fantsona izay aseho ao amin'ny tabilao sokajy, eo amin'ny faran'ny anarana hoe Fantsona BETA. Avy amin'ity lisitr'ireo fantsona BETA ity dia hanana alalana handoavana fantsona misy dikanteny Espaniôla isika, fantsona mandoa vola avy amin'ny sokajy Boomerang, NAHITANA, Cartoon Network, Comedy Central o Nickelodeon ankoatry ny safidy maro hafa hodinihina.
Noho izany rehetra izany sy ny maro hafa, dia manoro hevitra anao aho mba hanandrana ny MegaTV Player amin'ny terminal Android anao, ary ankoatr'izay afaka mijery baolina kitra maimaimpoana ary fantsom-bola maimaim-poana tsara indrindraIanao koa dia afaka mankafy fantsona maro tsy hita na tsy tafiditra ho toy ny mahazatra amin'ny fampiharana hafa amin'ilay karazany.
1 Sintomy ny MegaTV Player maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
2 Fampiharana bebe kokoa hijerena fantsona karama maimaim-poana
2.1 Ianao TV Player
Sintomy ny MegaTV Player maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
vaovao farany: raha tsy misy intsony ny MegaTV Player dia andramo sintonina ity hafa fampiharana hijerena fahitalavitra mandoa maimaimpoana.
Fampiharana bebe kokoa hijerena fantsona karama maimaim-poana
Raha te hampidina rindranasa bebe kokoa ianao hijerena fantsom-bola maimaim-poana, etsy ambany dia manolotra safidy vitsivitsy hafa ho an'ny MegaTV Player izahay. Manantena izahay fa tianao izy ireo:
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra hijerena fantsona karama maimaimpoana amin'ny smartphone Android na tablette misy anao Ianao TV Player, fampiharana tsara izay azonao sintonina ny APK (41,67 MB) eto. Misaotra an'ity fampiharana ity izay ahafahanao milalao horonantsary na sarimihetsika izay natahirinao tamin'ny fitaovanao, fa koa hanana fidirana amin'ny fantsom-pahitalavitra maro any Espana ianao, izay misy fantsona marobe hita ao amin'ny Movistar +.
Raha isaky ny faran'ny herinandro dia mankafy ny lalao tsara tarehy toy ny olon-kafa ianao ary mahatsapa ny lokon'ny ekipanao mandalo ny lalan-drantsika, avy eo Splive TV Player no fampiharana ilainao satria io no fampiharana be mpampiasa indrindra mijery baolina maimaim-poana amin'ny HD, fa ho afaka handefa fantsom-pirenena sy isam-paritra marobe ihany koa ianao ary handoa maimaimpoana ny fahitalavitra. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny lisitra w3u izay ahafahanao mijery ny fantsona rehetra tadiavinao avy amin'ny firenena eran-tany tadiavinao. Azonao atao ny misintona ny APK an'ny spLive TV Player eto.
Fampiharana iray hafa izay hanampy anao hijery fantsom-bola maimaim-poana avy amin'ny finday avo lenta Android anao dia Mobdro, iray amin'ireo fampiharana malaza sy be mpampiasa indrindra. Misaotra an'ity fampiharana ity dia tsy maintsy mahazo tapakilan-tsofina ho an'ny areti-maso ao amin'ny fivarotam-panafody akaiky anao indrindra ianao satria tsy ho afaka hijanona mankafy atiny streaming tsy miato: fantsona misy foto-kevitra, hetsika ara-panatanjahantena lehibe, fantsom-pahitalavitra nentim-paharazana sy maro hafa, na Espaniôla na avy any ivelany, mba hahafahanao mampiasa fiteny aza. Mobdro dia fampiharana fantsona fahitalavitra zato isan-jato, izany hoe eto ianao no misafidy fantsona tianao hojerena, toy ny amin'ny fahitalavitra, mandritra ny fandaharana mandeha. Azonao atao ny misintona ny Mobdro APK eto.
Raha tena mpankafy ireo fantsona misy sary mihetsika ianao, fa ny rafitra nentim-paharazana amin'ny fanarahana programa dia miteraka anao RepelisPlus afaka ianao jereo ny andian-tsary, sarimihetsika ary horonan-tsary rehetra tadiavinao maimaimpoana, tsy mila miandry fotoana voafaritra tonga. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mijery azy ireo amin'ny streaming na misintona ny atiny ao amin'ny smartphone anao hijerena azy ireo na aiza na aiza tsy misy fifandraisana. RepelisPlus Tsy rindranasa hijerena fantsom-pahitalavitra mandoa maimaimpoana izy io, fa iray amin'ireo fampiharana tsara naoty sy mahay manao asa indrindra ao amin'ny sokajy misy azy io. Aza adino izany. Azonao atao ny misintona ny APK maimaim-poana eto.
Raha mbola mieritreritra ianao fa tsy manana safidy hafa ampy hijerena fantsom-pahitalavitra andoavam-bola maimaim-poana, andian-tsarimihetsika, sarimihetsika ary maro hafa amin'ny Android-nao, dia mandeha amin'ny fomba hafa fanampiny izahay. Fahitalavitra an-tserasera Punga Free dia fampiharana izay azonao atao jereo maimaim-poana ireo fantsona Espaniola sy Amerika Latina, ary ao anatin'izany ny baolina kitra, ny ankamaroan'ny fantsona Movistar Plus ary maro hafa. Mazava ho azy, tadidio fa raha hampiasa an'ity fampiharana ity dia mila manana mpilalao video karazana VLC napetraka eo amin'ny terminal anao ianao, na raha tsy izany dia tsy mandeha izany. Afaka misintona ianao Fahitalavitra an-tserasera Punga Free maimaimpoana eto.
Ny fampiharana tsara indrindra hijerena Megadede amin'ny TV Box anao toy ny hoe TV Android
Mifanaraka amin'ny finday Android sy ny takelaka Android, ny MXL IPTV no mety ho fampiharana tsara indrindra hijerena fantsom-pahitalavitra mandoa maimaimpoana maimaim-poana, na farafaharatsiny izay no eritreretin'ny mpampiasa azy. Ary ny tsara indrindra dia ny fahitana azy misy ao amin'ny Play Store, noho izany dia tsy mila mampiasa rindrambaiko ivelany ianao na miatrika loza mety hitranga.
MXL IPTV dia mifototra amin'ny lisitra M3U sy fantsona m3u8 azonao atao ny mampakatra eo an-toerana sy any amin'ny toerana lavitra, mba hifanaraka amin'ireo endrika horonan-tsary streaming ankehitriny.
Ho fanampin'izay, tena marina mora ampiasaina Azonao atao ny mikaroka ny lisitra M3U amin'ny finday avo lenta ary mampiditra azy ireo haingana sy mora amin'ny MXL IPTV, izay manome tombony fanampiny maro hafa koa. Maimaimpoana tanteraka izany, koa inona no andrasanao hampitsangatsangana azy?
Mahalala fampiharana bebe kokoa ve ianao mijery fantsona karama maimaim-poana? Antenaina fa ny tabilao fanatanjahan-tena wiseplay tohizo mihazakazaka lava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Jereo fantsona aloa maimaim-poana
Isaac sainz dia hoy izy:
Ary tsy ho ela dia hitovy amin'ny Wiseplay izany
Valiny tamin'i Isaac Sainz
Abisai Castillo dia hoy izy:
Megatv ary ianao milalao mpilalao ihany no fantatro, misy manolotra soso-kevitra bebe kokoa ve?
Valiny tamin'i Abisai Castillo
Eduardo Rojas dia hoy izy:
Sasao mahadomelina io, aza lanilany ny fotoana anaovanao azy io, heveriko fa manome vola anao hampiroborobo an'io banga io ry zalahy ireto
Valiny tamin'i Eduardo Rojas
Compa, tolo-kevitra fotsiny io. Tsy manome hanala baraka olona izany. Raha mila fampiharana mitovy amin'izany ianao izay tsy miteraka olana dia andoavanao izany. Te hijery TV amin'ny satroka ianao, amin'ny app maimaimpoana ary mbola tezitra ... hahaha. Miarahaba!
Mamaly an'i malito
Jose Maldonado dia hoy izy:
Mankasitraka indrindra Miarahaba !!
Valiny tamin'i José Maldonado
Terry Bogard Uchiha dia hoy izy:
Ny fampiharana dia tsy ratsy, fa kosa Wiseplay ratsy kokoa isan'andro, ny tsara indrindra tsy misy fisalasalana dia ny Free Direct S
Valiny tamin'i Terry Bogard Uchiha
Azon'izy ireo ampiasaina ny chrome cast hahafahany mampiasa azy amin'ny fahitalavitra ary manana fomba mahasoa kokoa izy ireo amin'ny fahitana azy, ny app dia efa tsara amin'ny finday.
Jose Alberto Moya Picado dia hoy izy:
Mety hilaza izy ireo amiko fa tsy azoko, fa olona 68 taona aho; izany hoe amin'ny taona fahatelo. Tsy dia azoko loatra izany, fa ny tiako anontaniana dia hoe azo apetraka amin'ny PC ity rindranasa ity, na tsia. Efa manana izany amin'ny Android-ko aho ary io no fampiharana tsara indrindra, indrindra ny mahita ny Beins Sport izay manome ny lalao rehetra any Espana mazava sy tsy misy fanelingelenana.
Betsaka indray ary miala tsiny amin'ny fakan-kevitra. Averiko ihany, azoko apetraka amin'ny PC-ko izany. Misaotra Manantena aho fa hamaly ahy izy ireo.
Valiny tamin'i José Alberto Moya Picado
Ho an'i Jose Alberto Moya, ny valiny dia eny, fa aloha tsy maintsy mametraka karazana emulator android amin'ny windows ianao, misy maromaro toa ny Nox, sns., Nampiasa Bluestack tsy misy olana aho, soa ihany.
Ferchu dia hoy izy:
Salama! Fanontaniana iray azo atao ve ny mamindra ny sary amin'ny telefaona mankany amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny Chromecast? Manantena aho fa hisy hamaly ahy ... Nanandrana aho fa manana sary mijoalajoala ao amin'ny efijery fahitalavitra Mega TV ... misaotra betsaka!
Valiny tamin'i Ferchu
Salama, tsara, ny fampiharana dia azo jerena tsara miaraka amin'ny mazava, saika misy fantsona rehetra avy amin'ny hbo mankany amin'ny malaza rehetra ary maimaim-poana indrindra. tsy mandoa vola amin'ny orinasan'ny cities directv sns. Tsy maintsy manao toy izany koa izy ireo ary manavao ny fambara ary avy eo dia manome vola azy ireo hehe
Nampiasaiko foana tsy nisy olana izany, misaotra ireo mpamorona.
Te hahafantatra aho raha misy fampiharana Mega Tv ho an'ny iPhone 6
Voafafa tao amin'ny playstore
Tsy avelako hisintona azy io. Item tsy hita. Inona no azonao atao?
Manuel marquez perera dia hoy izy:
Inona no nitranga tamin'ny fampiharana mega tv mpilalao izay tsy ao amin'ny gogle play storet
Valiny tamin'i Manuel marquez perera
Jorge Bernal dia hoy izy:
Tsy mavesatra ny fantsona amin'ny url oneplay.tv voalaza fa mahazo lesoka ny fifandraisana tsy noforonina araka ny tokony ho izy, akatona ary sokafy ny fampiharana ary raha manohy manana olana ianao dia mankanesa any amin'ny vondrona facebook na hamarinina ny fifandraisanao
Valiny tamin'i Jorge Bernal
Tsy manana ny kianja intsony ianao hahitanao azy amin'ny cromecash
Alexander romero dia hoy izy:
Ity misy vahaolana hananana maimaim-poana ny fahitalavitra, sarimihetsika ary ny hafa. manaraka ny rohy
Valiny tamin'i Alejandro Romero
Luis m dia hoy izy:
Miarahaba, avy any Ekoatera aho, afaka misy olona manampy ahy na milaza amiko ny fomba hidirako amin'ny fantson'i Ekoatora satria mahazo fisaorana aho.
Mamaly an'i Luis m
Fantsona mahaliana raha tsy noho ny habetsaky ny programa duplicate napetrak'izy ireo, indraindray dia avoakany avo efatra heny, ary hanamparana azy rehetra (fantatro fa tohanan'ny dokam-barotra izy ireo) fa ny fametrahana dokam-barotra roapolo minitra dia toa diso tafahoatra loatra amiko. Mazava ho azy, tamin'ny fanovana ny fantsona dia voavaha ny olana.
Pitoc dia hoy izy:
Tsy manana ilay boaty intsony ianao hahita azy io amin'ny cromecash.
Valiny tamin'i Pitoc
Kitiho miaraka amin'ireo lalao Android mahafinaritra ireo ny findainao